AVANI inozivisa nyowani upscale 'AVANI +' brand kuwedzera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hospitality Industry » AVANI inozivisa nyowani upscale 'AVANI +' brand kuwedzera
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Investments • Laos Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
AVANI Hotels & Resorts inofara kuzivisa kuwedzera kwechiratidzo, AVANI +, nekutanga kwehotera yayo yekutanga muLuang Prabang munaKurume 1, 2018. Yakatangwa mu2011, AVANI ndeimwe yemhando dziri kukurumidza kubuda muAsia, parizvino iri kushanda pamusoro pe3,800 15 makiyi munyika gumi neshanu kumatunhu mazhinji uye iine mamwe makiyi zviuru zvitatu mupombi. Portfolio yeAVANI + ichasanganisira kusarudzwa kwemahotera uye nzvimbo dzekuchengetera dzinoratidza inotevera-nhanho muchitaera, dhizaini uye zvivakwa.
Imwe yeAVANI + ichataura yayo yakasarudzika nyaya kuitira kuti vashanyi vawane chimwe chinhu chidiki chekuwedzera, kubva kune dhizaini kugadzira kune nzvimbo uye kupfuura. AVANI + Luang Prabang anovimbisa kupa zvese izvo vafambi vane mireniyamu vane pfungwa vangatarisira pavanoshanyira UNESCO World Heritage Site muLaos. Iyi yega yakagadzirirwa AVANI + musanganiswa inoenderera kuburikidza nekufungidzira pfungwa dzekudyira neakasarudzika maresitorendi uye padenga remba kana al fresco bar pfungwa. Uye zvakare, AVANI + ichazivisa vashanyi kunzvimbo yekuenda kuburikidza nedhijitari nzvimbo ruzivo rwevanoongorora mazuva ano, ichipa ruzivo rwevashanyi mutsika yemuno, nzvimbo dzinotonhorera uye nezano rekufamba pamusoro pemaguta emumaguta uye mune dzimwe nguva, kure-kwe-kwakarohwa nzira dzenzvimbo.
AVANI + Luang Prabang iri munzvimbo iri pakati nepakati peLuang Prabang, uye matanho kubva kuMekong River, Royal Palace, uye Night Market. Sechikamu cheguta rinozivikanwa riri pamoyo wetsika dzeLaotian, AVANI + inomutsa bhawa pazvivakwa zveFrench neo-classical zvinowirirana nenharaunda yenharaunda, pamwe neFrance dhizaini-yakafemerwa dhizaini yemukati inosimudzira kunaka kwemazuva ano mukati. Iwo makamuri makumi mashanu evashanyi uye masutu ega ega anoratidza yepedyo, yakavhurika-chirongwa inonzwa neFrench-yakashongedzwa louvered matanda masuo ayo anovhurika kuvharanda kana tara yakatarisa padziva kana chivanze chega.
"Mahotera eAVANI + achazvikwidziridza nekuva anopfuura kungogadzirwa kwakasarudzika kana nzvimbo yakanaka yepakati peguta," akatsanangura Alejandro Bernabé, Mutevedzeri weMutungamiriri weOperations yeAVANI Hotels & Resorts. "AVANI yagara yakanangana nekupa ruzivo rwakakosha kune vashanyi vedu uye AVANI + ichatora izvozvo kusvika padanho rinotevera, ichitora mamwe maitiro uye kutora nzira isiriyo kune yedu yepamusoro up hotera pfungwa, ichidarika kupa zvivakwa zvepamberi, zvigadzirwa, uye sevhisi. . Isu tinofara chose kuzivisa AVANI + nekuvhurwa kweAVANI + Luang Prabang uye tinotarisira kuzivisa mamwe mahotera eAVANI + mumwedzi iri kuuya ”akagumisa.
COVID-19 denda rinokanganisa simba remapasipoti ekutanga